Uchwepheshe we-Semalt: I-Backlinks ithinta kanjani umkhankaso wakho we-SEO
Kunoma yiliphi ibhizinisi eliku-intanethi, ukuthuthukisa injini yokusesha kubalulekile ekubonisweni kobufakazi be-inthanethikanye nokwethembeka okukhulayo nokuguqulwa. Ngenxa yezizathu eziningi futhi eziningi, ukuhlelwa kufanele kube nesici kunoma iyiphi imakethe ye-digitalufisa ukuhlola i-SEO. Ngokwezici zonyaka ze-Google ezikhishwe yi-Searchmetrics, izici i-Google algorithm isebenzisaukubeka amasayithi kufaka ukuhambisana kokuqukethwe kanye negunya, izici zobuchwepheshe kanye newebhu webayithi lakho, izimpawu zomsebenzisi kusuka kokuqukethwe kwe-Googleukuqwashisa kanye nezinqolobane ezigunyazayo.
Noma kunjalo, ukuhlaziywa okuncane kwamanye amawebhusayithi asebenza namuhla kungabonisa ngokupheleleukutholwa okuhlukile - redirecionamento de dominio hostgator. Isibonelo, ngesethi ethile yamagama ayisihluthulelo, ikhwalithi nobukhulu bezixhumanisi akumele kusho isikhundla se-Googleulinganisa nawe. Isibonelo, amawebhusayithi anezixhumanisi ezimbi angase aphakame kunama-backlink aqinile.
Imibiko ye-Searchmetrics ukuthi ngokuhamba kwesikhathi, ama-backlink ayencipha njengendlela yokubekaisici njengoba i-Google algorithm namuhla ikhetha ezinye izici. Lolu shintsho luphumela ekukhuleni kokukhangisa kwezokuxhumana. Imithombo yezokuxhumana ineziningiukwabelana ngezixhumanisi ezingenza ukumelwa okungcono kwethrafikhi yekhwalithi. Ngenxa yalokho, i-backlink akuyona into eyinhloko njengoba yayisetshenziswangaphambili. Ziyisici nje sokuqeda u-tie ngenkathi kusungulwa amasayithi.
uJack Miller, iMenenja yezokuPhumelela kweMakhasimende aphezulu i-Semalt ,ixoxa ngokubaluleka kokuhlehliswa komkhankaso we-SEO ohlukile.
Okuqukethwe kanye nenhloso yomsebenzisi
I-Google ithi enye yezinto ezibaluleke kakhulu okufanele zicatshangelwe uma wenza i-SEOukuhambisana kokuqukethwe. Lesi sici sisebenzise okuqukethwe okubeka isayithi lakho kumsebenzisi hhayi nje ukudweba amathani wezithuthi. IUkuhambisana kokuqukethwe kuncike kokusesha amagama angukhiye. I-Google bots ingathola futhi amathuba okusebenzisa umuntu ngalesi simo. OkumnyamaIsihluthulelo se-SEO njengegama eliyisihluthulelo ukugxila akusekho umsebenzi futhi i-Google igxuma amawebhusayithi anjalo ngendaba yezinsuku.
Inhloso yomsebenzisi incike ekutheni umsebenzisi uxhumana kanjani nokuqukethwe okukuyoimiphumela yokusesha. Amaqhinga ahlanzekile we-bait-and-switch yokuthola ithrafikhi enkulu manje asebambe ukuze enze ukusetshenziswa okulungile kwe-Google algorithm,okwenza yonke inqubo manje isekelwe kokuqukethwe. I-Google icebisa abathengisi be-intanethi ukushaya ibhalansi phakathi kokuqukethwe kokuqukethwe nomsebenzisiukwaneliseka, hhayi nje amagama angukhiye.
Isakhiwo sakho sewebhusayithi akufanele sibe namaphutha kanye nezimbungulu. Indawo kufanele ibengokusheshisa ngokwanele futhi ukuphendula ukusebenza kumadivayisi ahlukene, izinhlelo zokusebenza ezipheqululini ezahlukene. I-Google algorithm ivuza isayithi ngeisikhombimsebenzisi esibonakalayo esinobuchwepheshe obunobungane ngokusebenzisa simo. Ezinye izici zobuchwepheshe ezifana nesivinini sesayithi, usayizi wefayela, ukuxhumanisa kwangaphakathi, ne-HTTPSukubamba iqhaza kuqala ukusebenza lapho kuxhumanisa ubuchwepheshe be-SEO nokuxhumanisa.
Ukuthengiswa kwedijithali, ukusebenza kwe-SEO kuyakha umgogodla wokukhona kwe-inthanethi futhiuphawu lwedijithali. Ukubuyisela emuva kuyingxenye yamasu we-SEO okwenza imilingo uma usetha amawebhusayithi. Noma kunjalo, ngamuvakushintshela indlela i-Google algorithm isebenza ngayo, ezinye izici ezifana nemithetho ye-HTTPS, imizamo yeselula yamanethiwekhi, ukuhambisana kokuqukethwe kanye nezenhlalakahleUkumaketha kwemidiya kudlalwa. Amanani okuchofoza okuphezulu, ukufaka amagama angukhiye, namasu afana ne-bait-and-switch ngeke aphinde asebenze futhi kungenzekakubangele isijeziso se-SEO. Ngenxa yalokho, ukubuyisa emuva akuyona into ebalulekile yokubeka isisindo esikhulu lapho ufuna ukwenza umkhankaso we-SEO ohlukile.